Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (14 June 2016) » SciBraai
Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (14 June 2016)
#ShisaSayensi Health & Medical Science Communication Technology & Computer Science
by Sibusiso Biyela June 15, 2016 June 15, 2016
Nazi izindaba zesayensi eyenzeke evikini eNingizimu Afrikha kanye nomhlaba wonke.
1. Ikhompyutha eyisimangaliso eyakhiwe eNingizimu Afrikha
2. UNozipho Gumbi ufike kuma-final omhlaba wonke kwi-Famelab
3. USuku lomhlaba lokunikela ngegazi
Ikhompyutha eyisimangaliso eyakhiwe eNingizimu Afrikha
Onke amazwe omhlaba anamandla kumele abanamakhompyutha anamandla awasiza ukuthi axazulule izinkinga ezibonakala ziyisimangaliso. Izwe leNingizimu Afrikha selingenile nalo ohlwini lalawa mazwe amakhulukazi ngokuba nomshini wekhompyutha ewahlula onke ezwenikazi leAfrikha.
Lomshini onikwe igama lesiTswana elithi “Lengau” elisho ingwe, wakhiwe i-Centre for High Performance Computing (CHPC). I-Lengau izisetshenziswa ukusiza ososayensi nalabo abasezinhlelweni zokuxazulula okuningi okubhekene nezwe lonke.
Minister Pandor congratulates the CSIR’s CHPC for unveiling the fastest computing system in Africa
UNozipho Gumbi ufike kuma-final omhlaba wonke kwi-Famelab
Uqale ngokubashaya amakhanda la eNingizimu Afrikha, ngenkathi uNozipho Gumbi ephumelela umncintiswano wososayensi obizwa nge-Famelab. Emele izwe ethu, uqhubekile nokuphumelela kwakhe wahamba waze wafika kuma-final omhlaba abanjelwe ezweni laseBhrithane.
UGumbi ungenele lomncintiswane wososayensi lapho benikwa imizuzu emithathu ukuthi bechazele ababukeli ngesayensi yabo ngendlela emnandi. uGumbi, ofunda eNyuvesi yeNingizimu Afrikha (UNISA) wayekhuluma ngocwaningo lwakhe olumayelana nokuhlwenga amanzi esebenzisa isisefo sobuchwepheshe obumangalisayo.
Famelab International Final 2016
Uploaded by FameLab on 2016-06-09.
USuku lomhlaba lokunikela ngegazi
Uma ukhuluma ngokunikela ngegazi, baningi abakhuluma izinganekwane eziyisimangaliso ezibenza bengafuni ukuthi ukunikela ngelabo igazi. Ziningi kakhulu lezi zinganekwane ukuthi ngingazibala la kodwa okubalulekile ukuthi ngikhulume ngeqiniso.
Iqiniso lithi igazi lakho leli elihamba phakathi kuwe liyakuphilisa, ngaphandle kwalokho linamandla okuphilisa omunye umuntu olidingayo ukuze asinde ekufeni. La, kungabalwa umama otetayo, ingane esinde engozini, nobaba ozohlizwa; bonke bayalidinga leligazi lakho.
Ungasiza ngokuthi uthathe isikhathi sokubheka izindawe ze-South African National Blood Service (SANBS) usindise izimpilo.
SANBS | Home
blood transfusiondonate bloodFamelabscienceShisa Sayensisouth Africa
Arts herstel kinders se sig
Elsabé Brits July 2, 2015 June 29, 2015